कसरी छुट्ट्याउन सकिन्छ नक्कली र सक्कली मह ? - tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
कसरी छुट्ट्याउन सकिन्छ नक्कली र सक्कली मह ?
१६ कार्तिक २०७६, शनिबार ०८:२३ मा प्रकाशित
971 Views पटक पढिएको
काठमाडौं, १६ कार्तिक : मह मानव स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक खाने कुरा हो । यसको माग पनि बजारमा यही कारणले धेरै हुने गर्छ । यही आवश्यकताका कारण अर्गानिक मह भन्दै बजारमा नक्कली महको बिगबिगी पनि धेरै छ । महको शुद्धताबारे जानकारी नभएकाहरु बजारमा विभिन्न बाहामा ठगिने गरेका हुन्छन् । चिनी पानीमा मौरीको चाका भिजाएर ‘शुद्ध मह’ भन्दै बेच्ने गरिन्छ । आफ्नै अगाडि चाकाबाट निकालेको मह भएकोले त्यसलाई धेरैले विश्वास गर्ने गर्छन् । त्यसैले अर्गानिक र शुद्ध महको कस्तो हुन्छ ? भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ । त्यसको शुद्धता परीक्षणको लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
१. तातो पानी बताइदिन्छ नक्कली वा सक्कली मह
२ आगोमा जल्छ शुद्ध मह
यदि पानीबाट जाँच गर्न सकिएन भने यसलाई आगोमा मिसाएर परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसको लागि पहिले एउटा मैनबत्ती जलाउनुहोस् र त्यसमा एउटा काठमा कपास राखेर त्यसको बाहिर मह दल्नुहोस् । त्यो मह लगाएको कपास जल्यो भने त्यो मह शुद्ध मान्न सकिन्छ । त्यदि त्यो कपास बल्न समय लाग्यो भने त्यो महमा मिसावट भएको पुष्टि हुन्छ ।
३. टिस्यु पेपरबाट पत्ता लाग्छ महको शुद्धता
४. पाउरोटीको सहयोगबाट परीक्षण
५. औलाको सहयोगले जाँच
६. पानी र भेनेगरबाट गरौं परीक्षण
काँचको गिलास या कचौरामा एक ठूलो चम्चाको एक चम्चा पानी हाल्नुपर्छ । त्यसमा २/३ थोपा सिरका र थोरै पानी हालेर राख्नुपर्छ । दुई तीन मिनेटसम्ममा त्यसमा फोका उठ्न थाल्यो भने जान्दा हुन्छ कि महमा मिसावट छ ।
जाडोमा ओठलाई कसरी मुलायम राख्ने ?
यस्तो हिँडाई जसले तपाईंलाई चाँडै बुढो बनाउँछ
फेसवास गर्दा कहिल्यै नगर्नुस् यी ६ गल्ती
स्लिम देखिन चाहानु हुन्छ ? पहिरनमा ध्यान दिनुहोस्
सधैँ एकै किसिमको खाना खाँदा के हुन्छ ?
विवाहलगत्तै बच्चा जन्माउनु कति ठिक ?
‘प्रिन्ट’ गरिएको कागजमा राखिएका खाद्यसामग्री खाँदै हुनुहुन्छ ? सावधान ! क्यान्सर हुनसक्छ
लामो समय पिसाब रोकिराख्ने बानीले निम्त्याउन सक्छ यस्ता समस्या
चायाले हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ तरिका र पाउनुहोस् छुट्कारा
इ-चुरोटको क्रेज बढ्दै तर स्वास्थ्यमा कम हानी गर्ने कुरा झुठो साबित